हिन्दू धर्म जबर्जस्ती कूटनीतिद्वारा र खरिदबिक्रीको आधारमा बढेको छैन । - Suvham News
हिन्दू धर्म जबर्जस्ती कूटनीतिद्वारा र खरिदबिक्रीको आधारमा बढेको छैन ।
Dr.Nirmala Mani Adhikary___________________
(२०५३ सालमा प्रकाशित, श्रीआस्था विशेषाङ्क वर्ष ३ अंक १४ ।)
मेरो दृष्टि कुनै कठमुल्लाकोझैँ छैन । आफ्नो अध्ययन संकुचित घेरामा सीमित राख्न चाहन्नँ म । तर्कविहीन लिँडेढिपीद्वारा कुनै कुरा प्रमाणित गर्नुको सार्थकता देख्दिनँ । एक क्षणको चटकबाजी र र चहकमहकले त्यतैतिर हाम्फाल्नुलाई मुख्र्याइँ भन्छु । तर्किएर हिँड्नेलाई टाढैबाट नमस्ते ! नजिकिनेलाई दृढ स्वरमा भन्छु – सनातन सत्य यही वैदिक हिन्दू धर्म हो । आफ्नो जागतिक कार्य निष्ठापूर्वक गर्दै परमानन्द प्राप्तिको लक्ष्यबोध औ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डाको सुख चाहना हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मको भनाइ छ ।
हिन्दू धर्म जबर्जस्ती कूटनीतिद्वारा र खरिदबिक्रीको आधारमा बढेको छैन । मैले मेरा पिताजी संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान पण्डित रुद्रमणि अधिकारीको प्रेरणा र अनुकम्पाले उपनिषद्का पाना केलाउने सौभाग्य पाएँ गीताका शब्दहरुमा दगुरेँ श्रीमद्भागवतमा विचरण गरेँ अन्य पुराणहरुकय रसास्वादन गर्न पाएँ । अत्यल्प ज्ञान भए पनि जाने-बुझेसम्म धारणाको प्रयास पनि भयो ।
मैले उल्लेख गरिसकेँ – साँगुरिनुमा मजा छैन । तसर्थ भगवान् सम्यक् सम्बुद्धका उपदेश गुरु नानकका निर्देशन र भगवान् महावीरका सन्देशहरु पनि मेरा रुचिमा परे । त्यसपछि वा सँगसँगै इसाइका बाइबल औ अन्य कृति र इस्लामी कुरान पनि पढ्न पाइयो ।
उपनिषद् एवं अन्य वैदिक हिन्दू ग्रन्थमा समेटिएका ज्ञानभण्डारले बताउने परमेश्वर सबैका साझा माता-पिता दुवै रुपका सर्वव्यापी समदर्शी । तर बाइबल र कुरानमा वर्णित ईश्वर पाषाणयुगीन कुनै कबिलाको अमानुष नृशंश अराजक र सम्पूर्ण विकारहरुको प्रतिमूर्ति सर्दारजस्तो । अरुलाई मार्ने;काट्ने सन्देश त छ्याप्छ्याप्ती ! पश्चिममा भएको दार्शनिक विकास त्यसैको विरोधमा त थियो । नित्सेले भन्यो नि – ईश्वर मरिसक्यो भनेर त्यही बाइबल र कुरानमा वर्णित छविलाई भनेको ।
हाम्रो सिद्धान्त सधैँ सर्वजनहिताय भन्ने रहेको छ । अहिले धर्मको नाममा जेहाद र क्रुसेड्का िहंस्रक डकार इस्लाम र इसाइको कारणले आएको त हो । धर्मका नाममा गरिएका अधार्मिक वितण्डाले आक्रान्त छ संसार ।
याद गरौँ त हिरण्यकशिपुलाई – उसले सारा संसारमा आफूलाई बलात् पूज्य बनायो र स्वयंघोषित परमेश्वर बन्यो । धेरै समय उसको अनर्थले धेरैको मनमा विश्वास पनि पायो । अहिले त्यस्तै छ । एकातिर नास्तिकहरु डुक्रँदैछन् भने अर्कोतर्फ धर्म भएको दाबी गर्दै इस्लाम र इसाइका आडमा अधर्म झाङ्गिदै छन् । अनि कमजोर र गुलाम मानसिकता भ्रममा पर्न थाल्यो कि कतै तिनीहरु नै ठीक त होइनन्
भनिएकै छ – कलि कालमा पहिलेझैँ स्थूल सैन्यबलको आधारमा धर्म र पापको लडाइँ हुँदैन । कलिको कारिन्दा मुर । विचार तरङ्गमार्फत् मानिसहरुमा आफ्नो पकड जमाउन प्रयत्न गर्नेछ । देखिएकै त छ आजको लडाइँ मानसिक किसिमको छ वैचारिक छ । पत्रपत्रिका टीभी रेडियो सिनेमाहरुलाई हतियार बनाउने उसको रणनीति छ । एन.जी.ओ./आई.एन.जी.ओ. सहयोगको नाममा उसकै मिसनलाई अघि बढाउन नेपाल छिरिरहेको पनि देखिएकै छ । हामीले उसकै हतियार खोसेर उसैलाई नहानी सुखै छैन ।
समय त निरन्तर प्रवाहमान छ । आधुनिक औ प्रगतिशील कहलिन धम्मरधुस गर्ने लठुवाहरु आफ्नै सांस्कृतिक वैभवविरुद्ध खनिँदै छन् । जुन थालमा खायो त्यसैलाई कुच्याउने ! आर्य परम्परा र सनात हिन्दू धर्म नबुझेर अनर्गल प्रलाप हुँदो छ ।
हामीले हाम्रो वैदिक दर्शनको अध्ययन गर्नै पर्छ । यसका लागि उपनिषद् पढिनु र पढाइनु पर्छ । प्रत्येक सम्पूर्ण मान्छे वैदिक दर्शनको अध्ययन गर्न खोज्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
मेरो ज्ञान अल्प छ तर लेख्छु हिन्दूत्व टङ्कारहेतु । मेरो मूल लक्ष्य वैदिक हिन्दूत्वको शंखघोष हो ।
Prevप्रबिण बस्नेत सचिब नेपाल क्योकुशिन सेइशिन -काइकन कराते संघ सगको अन्तर्वार्ता
Nextपाँचखाल र झिगु खोलाको संरक्षण कसरी गर्ने ?